Luxembourg Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: လူဇင်ဘတ်
နေအိမ် > လူဇင်ဘတ်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အားလုံးခရီးသွားဧည့်ဥရောပ၌ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်အဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ဥရောပလိုမြို့ကြီးပြသွားရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်မက်. သူတို့ထဲကတစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံပျော်ရွှင်စွာဘေးက Eiffel မျှော်စင်မှရပ်နေ, Colosseum သို့မဟုတ် Big Ben ကလူတိုင်းကိုခြွင်းချက်ခံစားရစေသည် (ကျနော်တို့လုံးဝကြောင်းအရ!). သင်တစ် ဦး Instagram စွဲရှိမရှိ…